15 FURRY ART SITES 2022 | DIB U EEGISTA UGU FIICAN Wareegga Hantida
Samee Money Online
Dhaqso U Samee
Lacag ku samee Sahaminta Internetka
Lacag ka samee New York
Shaqooyinka Lacag Bixinta Badan
Duuliyaha ugu mushaarka badan
ugu mushaarka badan Sport
Kaaliyaha Duullimaadka Lacagaha ugu badan
Ciidanka ugu Mushaharka Badan
Dhakhaatiirta ugu mushaarka badan
Qaabka ugu Mushaharka badan
Majaajiliistaha ugu mushaarka badan
Feeryahanka Lacagaha Ugu Badan
Qareenada ugu mushaarka badan
Podcaster-ka ugu mushaarka badan
Saxafiga ugu mushaarka badan
Sawir qaade Lacageedkii ugu sarreeyay
Wacdiyihii ugu Mushaarka badnaa
Sameynta Barnaamijyada Lacagta
Lacagta Apps ee iPhones
Lacagta Apps ee Android
Apps Kalluumeysiga ugu Fiican
Barnaamijyada Sonkorowga Aabaha
Apps Casharka Hore
Dhaqdhaqaaqa dhinaca ee Kanada
Hustle dhinaca Korantada
Fikradaha Dakhliga Dadban
daawo filim shaleemo bilaash ah online
buugaag bilaash ah oo loogu talagalay carruurta
Iibsiga ugu Fiican
Bogga ugu weyn 15 FURRY ART SITES 2022 | DIB U EEGIDA UGU FIICAN
15 FURRY ART SITES 2022 | DIB U EEGIDA UGU FIICAN
Daqiiqad 11 akhri
Maalin mashquul badan kadib, waxaad go'aansataa inaad ku raaxaysato daawashada filim waxaadna ku aragtay filimka in qaar ama dhammaan jilayaasha ay yihiin xayawaan leh astaamo u eg bini-aadam.
Waa adiga xiiso kuu leh hadana waxaad la yaabaysaa sida astaamaha xayawaanku u lahaan lahaayeen dabeecadaha aadanaha qaarkood filimada. Tusaale ahaan, Filimmo firfircoon oo leh jilayaal sida Sonic the hedgehog, Tom iyo Jerry, Donald Duke waa jilayaasha Fanka Furan.
Waad dhammaatay daawashada, weli, waxaad la yaabban tahay hal -abuurka ka dambeeya jilayaashaas.
Ha la yaabin sabab kale oo maqaalkani kuu geyn doono adduunka farshaxanka dhogorta: maxay tahay farshaxanka dhogorta leh, goobaha farshaxanka dhogorta leh, waxa ay qabtaan iyo sida ay u shaqeeyaan, 15 goobood oo farshaxanka dhogorta ugu fiican ah 2021.
Ha degdegin laakiin aan galno
WAA MAXAY FANKA FURRY?
Sida laga soo xigtay Wikipedia, farshaxanka dhogorta leh waa erey loo adeegsado sharraxaadda farshaxanka muujinaya anthropomorphic (fikradda ah in sifooyinka aadanaha loo nisbeeyo dadka aan ahayn) jilayaasha, xayawaanka iyo avatars-ka.
Qofka sameeya farshaxanka dhogorta leh waxaa lagu magacaabaa Farshaxanka Furry.
Erayada fudud, farshaxanka dhogorta leh waxaa loo isticmaalaa in lagu tilmaamo nus-bini-aadam, astaamaha xayawaanka badhkood oo sidoo kale loo yaqaan Anthros.
Waa maxay goobaha farshaxanka Furry ma ogtahay
Goobta farshaxanka dhogorta leh waa kayd kasta oo bulsho weyn oo ah farshaxanka garaafka, suugaanta iyo/ama faylasha maqalka ah kuwaas oo gebi ahaanba diiradda saaraya waxyaabaha dhogorta leh.
Farshaxanka dhogorta leh, ama farshaxanka anthro, waa qof abuuraya shaqooyin farshaxan leh fmaanka urry oo maanka ku haya sida dhagaystayaasha la beegsanayo, ama yaa u abuuraya farshaxanka anthropomorphic -ka xiisaha fandom -ka. Shaqooyinka fanaaniinta noocan ah waxaa loo yaqaan Furry Art.
“Farshaxanka dhogorta” waxaa inta badan loo adeegsadaa in lagu garto kuwa abuura farshaxanka sida sawirrada, sawirrada, kolajyada, farshaxannada, iyo noocyada kale ee shaqooyinka dhaqan ahaan loo maleeyo inay yihiin warbaahin muuqaal/muuqaal ah. Kuwa qora sheekooyinka dhogorta leh waxaa badanaa lagu tilmaamaa qoraayo xanaf leh.
Farshaxanka farshaxanka wax -qabadku sidoo kale wuxuu ku xiran yahay magacaabistooda, sida dhogor -xireyaasha, baalayaasha, fannaaniinta dhogorta leh iwm beertaas gaarka ah (tusaale ahaan sawir gacmeed).
Liiska kuwa ugu Fiican Goobaha farshaxanka/ Farshaxanka
1. Fur Affinity
Fur Affinity, oo sidoo kale loo yaqaan FA, waa bulshada ugu weyn ee fandom ee internetka ugu badan, oo diiradda saareysa kor u qaadista fanka, muusigga iyo sheekooyinka.
Goobta waxaa Alkora abuuray 2005 si loogu beddelo goobo kala duwan oo bulshada farshaxanka ah sida SheezyArt iyo DeviantArt, oo lagu garto in loo oggolaado xorriyadda hadalka ee farshaxanka iyadoon loo eegin qiimeynta maadada. Waxaa hogaaminaya Dragoneer.
Astaamaha Fur Affinity ee adeegsadayaasha waxaa ka mid ah awoodda u oggolaanaysa adeegsadayaasha inay la socdaan cusboonaysiinta cusub ee fannaaniinta gaarka ah; muuji kuwa ugu cadcad; oo soo geliyaan farshaxan farabadan oo kala duwan (sawirro, muusig iyo sheekooyin). Goobtu waxay isku daydaa inay kor u qaaddo bulshada iyada oo loo marayo nidaamka faallooyinka iyo joornaalada shaqsiyeed.
Astaamaha asturnaanta ayaa loo heli karaa adeegsadayaasha awood u leh inay ka horjoogsadaan martida inay arkaan waxa ku jira farriimaha sida “Username” loo doortay inay ka dhigaan nuxurka ay heli karaan isticmaaleyaasha diiwaangashan oo keliya ”iyo inay awoodaan inay qariyaan dadka waaweyn, qaangaarka ah+qaangaarka, ama dhammaan kuwa ugu cadcad aragtida dadweynaha
Weasyl waa maktabad farshaxan bulsheed oo u adeegta fandom -ka cadhada leh iyo bahda fanka ee balaaran ee internetka; waxaa “loogu talagalay fannaaniinta, qorayaasha, fannaaniinta, iyo in ka badan si ay shaqadooda ula wadaagaan fannaaniinta iyo taageerayaasha kale.
Astaamaha aasaasiga ahi waa soo gudbinta warbaahinta, astaamaha astaamaha, iyo gelitaanka joornaalka. Weasyl waxay ku dartay suuq komishan, waxay dib-u-habaysay nidaamkeeda sawir-gacmeed si ay u taageerto sawirrada waaweyn, waxayna sii daysay koodhkeedii sida software-il furan.
Isticmaalayaasha Weasyl waxay soo rogi karaan xaashiyaha tixraaca ee astaamahoodii asalka ahaa iyo fursonas iyagoo adeegsanaya soo gudbinta astaamaha; kuwani waxay kaga duwan yihiin noocyada kale ee soo gudbinta iyagoo si gaar ah u tilmaamaya macluumaadka taariikh nololeedka iyo tilmaanta jireed ee dabeecadda.
Soo-gudbinta ayaa si ikhtiyaari ah loogu abaabuli karaa faylal-qeexan isticmaalaha; faylka xididka gaarka ah waa meesha caadiga ah.
Haddii adeegsaduhu rabo inuu ku soo bandhigo farshaxan uu sameeyay qof kale boggooda astaanta gaarka ah, muuqaal loo yaqaan ururinta ayaa u oggolaanaya isticmaalaha inuu ku dhajiyo isku xirka gudbinta asalka ah ee galaalkooda.
Ujeedada astaantani waa in la yareeyo soo gudbinta nuqullada ah oo la siiyo farshaxanka tixgelinta mudan, iyada oo wali la siinayo hab adeegsadayaasha kale (tusaale ahaan, kuwa astaantooda lagu sawiray farshaxanka) si ay u jiheeyaan kuwa raacsan si ay u arkaan shaqada.
Farshaxanyahannada iyagu isu sii deynaya sameynta farshaxanka iyagoo adeegsanaya fiidiyow toos ah ayaa u diri kara ogeysiisyo qulqulaya kuwa raacsan Weasyl, oo ay ku jiraan sharraxaadda nuxurka iyo iskuxirka bogga durdurka; ogeysiisyadan waxaa loo dejin karaa inay si otomaatig ah u dhacaan kadib waqti cayiman. Xaaladda qulqulka isticmaalaha ayaa sidoo kale lagu arki karaa boggooda astaanta.
Isticmaalayaasha ayaa midba midka kale u magacaabi karaa saaxiibo, xiriir ka duwan kuwa raacsan oo u oggolaanaya inay la wadaagaan soo-gudbinta saaxiibbada kaliya kuwa ay yaqaaniin.
SoFurry waa degel xanaaq badan oo ku saleysan Yiffstar laakiin wuxuu ku fidaa waxyaabaha aan qaangaarka ahayn iyadoo xoogga la saarayo bulshooyinka isticmaala.
Goobtu waxay leedahay nidaam dhammaystiran oo adeegsadaha bulshada kaas oo loo adeegsado nooc ka mid ah shaandhaynta wada shaqaynta. Isticmaalayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay helaan ama ku biiraan "kooxo" daboolaya arrimaha mawduuca gaarka ah. Kooxahani waxay yeelan karaan goleyaal isku dhafan oo dhammaystiran iyo xitaa qolalka lagu sheekaysto ee mareegaha.
Isticmaalayaasha ayaa wali adeegsan kara astaamaha la aasaasay sida liis-ilaaliyaasha shaqsiyeed si ay u helaan waxyaabo cusub, laakiin sidoo kale waxay dhisi karaan koox wada-shaqayneed oo ugu cadcad kooxaha dhexdooda, taas oo u oggolaanaysa dadka ku biira kooxaha inay isla markiiba awood u yeeshaan inay dhex maraan maktabad ay bani-aadamku ka kooban yihiin oo si gaar ah ugu habboon kooxda mawduuc. Kooxuhu waa isticmaale-abuuray oo isticmaale-dhexdhexaad ah.
Ka sokow shirarka iyo wada sheekaysiga kooxaha dhexdooda, goobtu waxay kaloo leedahay goleyaal caalami ah iyo qolal lagu sheekeysto oo ay ilaaliyaan dhexdhexaadiyayaasha goobta. Boggu wuxuu bixiyaa nidaam xaqiijin hal-mar-suuf ah oo loogu talagalay xaqiijinta sugan ee shabakadaha amni darrada ah iyo sidoo kale API loogu talagalay soo-saareyaasha dalabka.
Muuqaal kale oo weyn ayaa ah dhammaystirka maareynta komishanka iyo nidaamka wax iibsiga, kaas oo adeegsadayaasha iyo fannaaniintu ay ku maamuli karaan liiskooda guddiyada socda, sidoo kalena iibiya oo iibsada adeegyada komishanka. SoFurry ma maamusho lacag bixinta ama kama haynayso boqolley kasta guddiyada, nidaamku waa u bilaash inuu isticmaalo qof walba.
Isticmaalayaasha ayaa shaqsiyaadkooda u adeegsan kara boorarkooda iyaga oo wata boorar ay site ku leeyihiin, kuwaas oo la muujiyo mar kasta oo uu qof arko ama u fiirsado soo gudbintooda.
Soo-gudbinta waxaa si shaqsi ahaan loogu soo ururin karaa fayl-hoosaad-hoosaad kaas oo adeegsadayaasha kale ay iska qori karaan cusboonaysiinta soo gudbinta cusub. Sheekooyinka waxaa lagu soo dejisan karaa qaab epub, iyo fayl ay ku jiraan sheekooyin ayaa loo soo dejisan karaa sida faylalka epub oo la jeexjeexay.
4. Shabakadda Furry
Shabakadda Furry waa bulsho online ah oo diiradda saareysa dhiirrigelinta farshaxanka iyo shaqooyinka hal -abuurka ah ee ka dhex jira fandom -ka dhogorta leh.
Boggu wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay "dhiirrigeliyaan" iyo / ama soo gudbinta "jecel". “Dhiirrigelinta” soo gudbinta ayaa keenta in soo gudbinta la soo xulay si cad loogu muujiyo astaanta isticmaaleha kor u qaadista, halka “doorbididda” ay ku darsato u -gudbinta maktabad gaar loo leeyahay koontada isticmaalaha.
Boggu wuxuu kaloo u oggolaanayaa mid inuu soo dejiyo soo gudbinta, avatars -ka iyo saacadaha akoonka Fur Affinity. Goobtu waxay u oggolaanaysaa isticmaale inuu ku abuuro astaamo badan “dabeecad” hal koonto. Isticmaalayaasha waxay ku soo ururin karaan soo gudbintooda hoosteeda faylasha, laakiin hadda ma oggola inay is -diiwaangeliyaan.
5. Cadho Aamino
Furry Amino waa beel ka tirsan shabakadda bulshada iyo sheekaysiga Aamino. Furry Amino waxay leedahay barnaamij gooni ah oo loo sii daayay macruufka iyo Android. App -kan wuxuu la wadaagaa astaamihiisa mid ka mid ah beel kasta oo kale oo lagu martiqaaday madasha Aamino.
Furry Amino waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay sameeyaan dhejimaha baloogga, su'aalaha, codbixinta oo ay la wadaagaan bulshada. Isticmaalayaasha ayaa is raaci kara midba midka kale waxayna arki karaan qoraallada isticmaaleyaasha ay si toos ah ula socdaan jadwalka.
Wada sheekaysiga dadweynaha iyo kan gaarka ah labaduba waxay taageeraan farriinta deg dega ah. Waxyaabaha galmada ah nooc kasta ha ahaadee waa laga mamnuucay Furry Amino.
F-list (gaaban Fetish-list) waa tusaha jilayaasha, iyo paraphilia la xiriirta iyaga, ujeeddooyinka doorka. Waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha jira siddeed iyo toban ama ka weyn inay taxaan xarfo badan koonto kasta, la hadlaan kooxo ku habboon dantooda, isla markaana ku sheekeysta waqtiga-dhabta ah iyada oo loo marayo server-ka wada sheekeysiga ee goobta ujeeddada jilitaanka.
F-liistu waxay udub dhexaad u ahayd door-ka-ciyaarista kuwa aan cadho lahayn tan iyo markii la aasaasay, dad badanina waxay ku khaldan yihiin 'F-list' 'Furry-List' taas oo aan ahayn, waxayna sii ahaataa meel caan ku ah jilitaanka, wada hadalka guud, iyo la kulanka dadka leh dano wadaaga, lab iyo dheddig labadaba
F-liistada waxaa loo qaabeeyey sida xog-ku-saleysan liisaska astaamaha. Xubin kastaa wuxuu u diiwaangelin karaa jilayaal badan astaantooda, dabeecad kastana waxaa loo qoondeeyay liis u gaar ah “kinks” oo loo qaybiyay afar qaybood: “Fave”, “Haa”, “Malaha”, iyo “Maya”. Mid kasta oo ka mid ah qaybahan waxay u taagan tahay heer ka duwan inta dabeecaddu ku raaxaysato kink gaar ah.
Marka la abuuro dabeecad, adeegsadaha waxaa la siiyaa liis ballaadhan oo ah “kinks”, ama paraphilias, si uu u kala doorto, waxaana lagu dhiirrigelinayaa inuu u kala sooco mid ka mid ah afarta qaybood ee astaanta guud ee dadweynaha ama inuu uga tago meel bannaan si looga saaro gebi ahaanba.
Sidoo kale tiro aad u badan oo gogol -xaadhisyo hore loo sii diyaariyey oo loo heli karo xulasho, dhammaan xubnaha ayaa loo qoondeeyay 500 “kinks caadooyin” ah, kuwaas oo u oggolaanaya soo -gelinta danaha caadada ah ee laga yaabo inaysan haddii kale diyaar u ahayn xulashada mar hore.
Macaamiisha, ama xubnaha ku deeqa barta si ay u ilaaliso adeegeeda iyo kharashaadka kale, kuma koobna tirada noocyada caado ee ay ku dari karaan astaamahooda 'astaamaha dadweynaha.
Xiriirka ka dhexeeya xubnaha waxaa lagu samayn karaa iyada oo la adeegsanayo “qoraalada”, ama iyada oo loo marayo adeegga wada sheekaysiga ee F-listku siiyo xubnaheeda.
“Xusuus-qoryada” waxay u adeegtaa hab lagula xiriiro xubnaha kale ee laga yaabo inaanay ku jirin internetka, ha isticmaalin shaqada sheekaysiga, ama kuwa doorbidaya asturnaanta farriinta-snail-mail, oo u shaqeeya sida farriinta gaarka ah ee goleyaasha iyo guddiga kale ee sheekaysiga adeegyada ku salaysan
Favilla waa ciyaar-xayawaan-ku-saleysan oo ku saleysan biraawsarka oo ay ka dhex muuqdaan dadka tuulada dhogorta leh, oo la mid ah Neopets iyo Flight Rising. Favilla waxaa lagu sameeyaa surwaal. Surwaalku waa nashqado caadooyin ah oo ciyaartoydu u adeegsan karaan inay shaqsiyeeyaan tuulahooda.
Xanuunada waxaa lagu sameeyaa iyada oo la tafatirayo saldhigga tuulada Furvilla oo horay u jiray oo leh softiweer tafatir oo dibadeed waxayna ka koobnaan kartaa dib-u-soo-noqosho fudud ilaa beddelidda khadka.
Kaydinta rinjiyadu waxay ku kacaysaa 250 FurDollar, qiyaastii $ 2.50 USD.
Inkbunny waa bulsho farshaxan xanaaq badan, oo soo bandhigaysa farshaxan, majaajilo, sheekooyin, muusig iyo riwaayado loogu talagalay taageerayaasha xayawaanka anthropomorphic.
Barnaamijkan wuxuu u jiraa inuu ka caawiyo fanaaniinta inay wadaagaan oo iibiyaan shaqadooda. Goobtu mar bay qaadday guddi iibinta iyo qaybinta soo-dejintooda dhijitaalka iyo daabacaadda leh ee xallinta sare leh, laakiin hadda deeqaha iyo badeecaddu waa ilaha dakhli ee keliya; wax khidmad ah lagama qaado si aad ugu biirto, u muujiso shaqada, uga qayb gasho ganacsiga ama u aqbasho deeqaha goobta.
Inkbunny wuxuu soo dhaweynayaa dhogorta leh danaha kala duwan, fetishes, iyo 'philias. Si loo fududeeyo isdhexgalka wanaagsan, xubnuhu waxay dhexdhexaadin karaan soo gudbintooda iyo joornaaladahooda, waxay ka mamnuuci karaan adeegsadayaasha carqaladeeya inay ka faalloodaan oo la xiriiraan, oo shaqada ku hor istaagaan ereyga muhiimka ah, qiimeynta ama farshaxanka.
9. REDDIT: Subreddit
Reddit furry ama furry Reddit waa beel adeegsade abuuray (oo loo yaqaan subreddit) oo ku jira isku darka wararka, qiimeynta nuxurka, iyo mareegaha doodda ee Reddit oo u heellan ka doodista macluumaadka iyo warbaahinta khuseeya ee ku saabsan fandom-ka dhogorta leh.
Subreddit -ka waxaa abuuray Maajo 2008 isticmaale la yiraahdo Corbin Fox iyo laga bilaabo Oktoobar 2018, in ka badan 61,000 adeegsade, oo sidoo kale loo yaqaan redditfurs, ayaa lagu qoray liis -hoosaadkan.
Ahaanshaha subreddit oo loogu talagalay fandom -ka cad, macaamiishu waxay la wadaagi karaan farshaxanka la xiriira dhogorta, sheekooyinka, fiidyowyada, iyo sawir qaadista midba midka kale oo loo codayn karo. Isticmaalayaasha ayaa sidoo kale awood u leh inay bilaabaan wadahadalo ku saabsan fandom -ka ama weydiiyaan su'aalo macaamiisha kale.
10. TELEGRAM: Telegram Furlist
Telegram Furlist (oo sidoo kale loo yaqaan Furry Telegram Groups) waa degel u heellan liistada kooxaha dhogorta leh ee telegram-ka fariimaha deg-degga ah. Websaydhku wuxuu oggolaanayaa liiska labada SFW iyo NSFW.
Websaydhku wuxuu u oggolaanayaa dadka inay liis gareeyaan kooxdooda iyaga oo adeegsanaya Telegram bot, FurListBot, kaas oo maamula dhammaan tafatirka websaydhka adeegsadayaasha. Kooxaha waxaa lagu kala saaraa qaybaha sida heshiisyada, danaha, mareegaha ama noocyada.
11. Fox Amoore (Farshaxan)
Fox Amoore oo sidoo kale loo yaqaan Amoore (wuxuu dhashay 26 Ogosto, 1984) waa muusikiiste xirfadle ah oo reer Scotland ah oo waqti buuxa ku jira fandom dhogorta leh. Wuxuu hadda u yahay maamule Fur Affinity.
In kasta oo Fox Amoore uu diiradda saarayo shaqooyinka casriga ah ee asalka ah, haddana wuxuu sidoo kale sumcad ku yeeshay fasiraadda shaqsiyeed ee heesaha dhawaaqa, muusigga caanka ah, iyo inta badan, muusigga ciyaarta fiidiyaha. Qaybaha tijaabada ah ayaa sidoo kale caan ah, oo u dhexeeya ragtime ilaa qoob ka ciyaarka iyo farsamada.
Fox Amoore wuxuu si joogto ah u cusbooneysiiyaa oo kor u qaadaa qalabkiisa muusigga iyo istuudiyaha si uu u bixiyo codka ugu fiican ee suurtogalka ah. Qaar ka mid ah aaladihiisa ganacsi waxaa ka mid ah kiiboodhka Roland Fantom X8, kiiboodhka Yahama Tyros, Symphonic Orchestra Platinum iyo Symphonic Choir Virtual Instruments, iyo Cubase 5 software duubista.
12. RukisCroas (Fanaan)
Rukis Croax waa fanaaniinta anthro Americanskaya iyo qoraa ku nool meel u dhow Greenville, South Carolina, USA. RukisCroax waa hal-abuure, qoraa iyo sawir-qaade majaajilada Arxan-darrada ah iyo taxaneheeda aan Shuruud lahayn, iyo wada-abuuraha, qoraa iyo sawir-qaadaha majaajillada Red Lantern.
Majaajiliistii ugu horreysay ee Rukis, Waxshinimo, waxaa daabacday FurPlanet waxaana looga dooday Anthrocon sannadkii 2010. 44 bog, Rukis wuxuu u tixgeliyey tan “majaajilo dhaqameed”. Si kastaba ha noqotee, waxay ku iibisay maalintii ugu horreysay ee shirweynaha, Rukis wuxuu sii waday inuu abuuro taxane (Shardi la'aan).
Sannadkii 2009 ayay bilowday Red Lantern. Mugga labaad ee majaajilada, oo la qorsheeyey in lagu sameeyo afar jumladood, ayaa hadda qoraal ah waxaana lagu sii daayaa Fur Affinity ka hor inta aan la daabicin oo ay ku jiri doonaan muuqaallo galmo. Mugga kowaad waxaa isla soo qaaday Alector Fencer, si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu beddelay Myenia sanadkii 2012.
13. Adeer Kage
Dr. Samuel Conway, oo sidoo kale loo yaqaan KagemushiGoro ama Uncle Kage, waa Guddoomiyaha Anthrocon, wuxuuna si joogto ah uga qaybgalaa shirar kale oo dhogor badan.
Wuxuu marti sharaf ku ahaa shirar badan, oo gudaha iyo dibeddaba, oo ay ku jiraan Albany Anthrocon, Feral! 2001, ConClave, Duckon, Eurofurence 8 (2002), Furlaxation 2012, Philippine Anthro Festival 2014, Fur Reality 2015, iyo Arizona Fur Con 2015.
Adeer Kage magaciisu dhab ahaantii waa soo gaabin KagemushiGoro, ama Baranbaraha Samurai, fursadaha uu doortay (kagemushi waa Jabbaan oo loogu talagalay cayayaanka hooska; tani, markeeda, waa ciqaab erayga Japan ee kagemusha).
Sannadkii 2001, Adeer Kage wuxuu qarsoodi u galay MephitFurmeet 5 asagoo ah “Furimaha Aan La Garanaynin”, isagoo xiran dhar-furis raqiis ah, oo ay ku jirto maaskaro laga sameeyay boorso warqad ah.
Kage waxaa Jim Groat ku soo bandhigay fandom -ka cad ee Noreascon sannadkii 1989. Wuxuu si joogto ah u noqday FurryMUCK sannadkii 1991 -kii welina waqti ayuu ku qaataa fiidkii.
Kenket, oo sidoo kale loo yaqaan Tess Garman, waa farshaxan yaqaan iyo shir-goer. Fursona waa tuke, farshaxankeeduna badiyaa wuxuu sawiraa tukayaasha, shabeelka, digaagga, iyo eeyaha. Waxay la shaqayn jirtay BlackTeagan iyadoo ku hoos jirta magaca Blotch waana sawir -qaade madax -bannaan.
Shaqada Kenket waxay ka soo muuqatay majaladda Cricket -ka, dhowr daabacaad goboleed, bandhigga TV -ga Mire Waqaf, waxaana loo adeegsaday saldhigga menus DVD. Waxay gacan ka geysatay isku -dubaridka Kaadhka Bestiary Card, waxay ka shaqeysay sagxadda Naadiga Kennel iyo sidoo kale jadwalka Wish You Here Here.
Kahor inta aysan u guurin California si ay ula joogto ninkeedii hore, Gatcat, waxay ku noolayd England. Ka dib California, waxay kula noolayd Kyoht iyo Gre7g Utah iyo muddo aad u gaaban Washington. Waxay Colorado kula noolayd BlackTeagan ilaa 2006.
15. Natasha Madow
Dark Natasha (waxay dhalatay 1972) waa farshaxaniiste ka soo jeeda Evergreen, Colorado, oo biloowday xirfadeeda fanka iyada oo sameysa daboolida Furrlough iyo majaajiliiste Genus oo ay daabacday Radio Comix. Shirkeedii ugu horreeyay ee dhogorta badnaa wuxuu ahaa ConFurence 10 sanadkii 1999.
Farshaxanka Natasha ayaa noqday mid caan ah, tan iyo markaasna waxay ka mid ahayd fanaaniinta dhogorta ugu iibinta badan. Shaqadeedu waxay u egtahay mid dhab ah oo u eg, laakiin waxay kaloo samaysaa sawirro khiyaal ah oo saafi ah.
Dark Natasha waxaa laga yaabaa inay caan ku tahay sawiradeeda iyo sawirada makhluuqaadka khiyaaliga ah (ma aha oo kaliya dhogor), laakiin waxay qabatay shaqooyin warbaahin iyo noocyo kala duwan ah, oo ay ku jiraan sawirro aad u macquul ah oo shimbiro iyo xayawaan kale ah. Waxay joogto ugu tahay Jahwareer Dheeraad ah waxayna guud ahaan iibisaa daabacaadaha iyo sidoo kale samaynta guddiyada sawir -gacmeedka.
Mid ka mid ah goolaheedii aadka loo yaqaanay, oo ahaa shan-cagood, laba boqol oo masduulaagii rodol ah, ayaa waxaa helay TCI/Jones Intercable CEO Glen Jones. Maanta farshaxankaasi wuxuu deggan yahay hoolka weyn ee xarunta shirkadda isgaarsiinta ee Denver.
Dark Natasha waxaa loo soo bandhigay farshaxanka dhogorta leh shaqada Terrie Smith, in kasta oo lagu soo jiitay farshaxanka khiyaaliga ah oo ay hore u sawirtay jilayaasha anthropomorphic. Shirkeedii ugu horreeyay ee dhogorta badnaa wuxuu ahaa ConFurence 10.
Farshaxanimada dhogorta leh waxaa loo adeegsadaa in lagu qeexo kala bar aadanaha, astaamaha xayawaanka nuska ah ee sidoo kale loo yaqaan Anthros halka farshaxanleyda cufan ay tahay qof abuura farshaxan dhogor leh. Dhageystayaasha xiiseynaya farshaxanka dhogorta waxaa lagu magacaabaa Furry Fandom, waxaan rajeynayaa in maqaalkan uu bixiyay mid ka fudud
Waxaan sidoo kale ku talinaynaa:
Sida Loogu Sameeyo Lacag Farshaxan Dijital ah | 13 Hababka Ugu Fiican Sanadka 2021
21 GOOBOOYINKA XAFLADDA UGU FIICAN 2021
20 Shirkadaha Kaarka Salaanta ah ee Aqbalaya Soo -gudbinta 2021 -ka
cinwaanka email Your aan laga soo saari doonaa. Beeraha loo baahan yahay waxaa lagu calaamadeeyay *
Ku keydi magacayga, emaylkayga, iyo degelkayga biraawsarkaan waqtiga xiga ee aan faallo ka bixin doono.
Fiiri Faallooyinka (0)
- Maqaal hore
Waa maxay Hantida Guryaha Dijital ah? Sideen lacagtayda ugu maalgelin karaa | 2022?
Maqaalka soo socda -
33 Goobaha Kabaha Lagu Iibiyo Lacag Kaash ah 2022 | Ha Waayin Waqtigaaga
Waxaad sidoo kale laga yaabaa in
Daqiiqad 9 akhri
MDhaqso U Samee
Gawaarida Gawaarida 101: Samee in ka badan $ 200/maalintii Baabuurta Flipping ee 2022
Haddii aad jeceshahay baabuurta oo aad u aragto inay yihiin dariiqa suurtagalka ah ee aad lacag ku samayn karto, baabuur u rogaya...
Daqiiqad 7 akhri
21+ Siyaabaha Lacag Loogu Sameeyo Hal Saacad | 2022
Haddii aad waligaa ku jirtay xaalad aad lacag ugu baahan tahay si degdeg ah, waxaad fahmi doontaa sida…
Daqiiqad 6 akhri
20 Kordhinta Browser Dakhliga Dakhliga Ugu Fiican 2021
Dhowaan, waxa soo baxay habab badan oo dakhli dadban. Mid ka mid ah siyaabahan ayaa ah iyada oo loo marayo…
MSamee Money Online
21 Siyaabood Oo Lacag Loogu Siin Karo Sawirro [$ 100+] | 2022
Aynu nidhaahno, waxa aad caadaysatay in aad sawirro aan toos ahayn iska qaaddo, oo marka lagu weydiiyo waxa ay hiwaayaddaadu tahay, in aad sawiro qaadatid...
Daqiiqad 10 akhri
13 Siyaabood oo Loogu Guuleysto Ku -Bixinta Amazon oo Lacag Lagu Helo
Waxa ugu yaabka badan ee aan bartay dhowaan waa inaad ku guuleysan karto qaar ka mid ah hadiyadaha bilaashka ah ee Amazon. Waxay u egtahay yaab ...
MSameynta Barnaamijyada Lacagta
Sida Lacag Loogu Sameeyo Kulliyadda Shaqo La'aan | Aad u Suurtogal ah
Ii aamin, sida arday jaamacadeed, waxay boqornimadu tahay in si joogto ah loo helo deyn. Haddaba, iyadoo…
Halkee laga Iibsan karaa Kaararka Hadiyada ee Costco sanadka 2022
Amaahda Shakhsiyeed ee Degdegga ah: Amaah bixiyayaasha ugu Fiican ee Lacag Dhakhso ah
Waa maxay Shuraakada Maaliyadeed, oo ma u baahan tahay mid?
Intee le'eg ayaa la bixiyaa UFC Fighters? Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Sidee Loo Bixiyaa Realtors 2022? Khiyaamada Maalgashiga
No comments si ay u muujiyaan.
Naqshadeeyay & horumariyey Codsiyada Supply Co.